IMisa Marketing Ukuqhathanisa Ukwenza ngezifiso | Martech Zone
IMisa Marketing Ukuqhathanisa Ukwenza ngezifiso
ULwesithathu, May 8, 2013 Douglas Karr
Uma uke waba ngumfundi womsebenzi wami, uyazi ukuthi ngingumphikisi we Ukuqhathanisa isifaniso kwezentengiso. Imvamisa, njengakwisimo sokwenza ngezifiso, hhayi ukukhetha ukuthi yiliphi isu elizolisebenzisa, kepha ukuthi uzolisebenzisa nini isu ngalinye. Kukhona okungaqondakali kokuthi le infographic ukumaketha ngobuningi… Kepha iqhubekela ekwenzeni ngezifiso okuthuthukile. Zombili zisebenza kahle lapho zisebenzisa kahle.
Ngesinye isikhathi, konke ukumaketha kwakungokomuntu siqu. Umthengisi wendlu ngendlu, umthengisi webhange, nohaberdasher bonke babewazi amagama amakhasimende abo ngamagama. Izicucu zeposi eziqondile zaphrintwa ngezinhlobo ezahlukahlukene ukunxenxa i-geography noma okuthandwa yikhasimende. Ngemuva kwalokho, ngokuqala kwe-imeyili namawebhusayithi, abathengisi baqala ukuthembela kumasu wokumaketha ngobuningi ukuletha umyalezo owodwa kuziteshi ezintsha zedijithali. Kusuka kwaMonetate's I-infographic Mass Marketing Ukuqhathanisa nokwenza ngezifiso
Bheka le infographic bese uqiniseka ukulanda i-ebook ye-Monetate, The Amaqiniso Wokuzenzela Ku-inthanethi. Kukhiqizwe ngokubambisana ne-Econsultancy, ucwaningo lwabo olukhethekile luhlola ukuthi yini eqhuba ukwenza ngezifiso ku-inthanethi, amaqhinga nezinhlobo zedatha ezisetshenziswayo ukwenza isipiliyoni samakhasimende aku-inthanethi nezithiyo zempumelelo.
Tags: ukumaketha ngobuningiimaliukwenza ngezifiso onlineukuzenzela
Amabhrendi, Imibala Nemizwelo
Curalate: Ukwenza i-Social Curation Work for Brands
May 8, 2013 ku-5: 47 PM
Lapho izinkampani zisebenzisa imithombo yezokuxhumana, ukwenza ngezifiso kufanele kube yinto ephambili kakhulu. Imithombo yezokuxhumana imayelana nokuzibandakanya nokuxhumana komuntu nomuntu. Uma izinkampani zingazami ukuzibandakanya nomthengi, zizobalahlekisela.